ALAROBIA 8 JOLAY 2020
CHRISTINE RAZANAMAHASOA : Fotoana tokony hamerenana ny soatoavina malagasy izao
Nisaotra ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny mpitsabo, mpitsabo mpanampy, ny avy amin’ny ivon-toeram-pikarohana IMRA, ny Tafika, ny Zandary, Polisy, mpilatsaka an-tsitrapo, ny Governora, ny FFKM sy ireo maro hafa nikely soroka sy nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin’ny fanoherana ny fiparitan’ny Covid-19 ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Christine Razanamahasoa nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana atrehin’ny solombavambahoaka eny amin’ny CCI Ivato, omaly. 6 mai 2020
Nanteriny hatrany fa ireo no "andry" iankinan’ny aim-bahoaka ary ireo koa no tsy natory andro, tsy nandry alina nitady izay hanasoavana ny mpiara-belona. "Ianareo no nianteheran’ny vahoaka malagasy, ary ianareo no manao ny ainareo tsy ho zavatra hiarovana ity Firenena ity. Mbola anaty ady isika saingy azo ireharehana fa tsy mbola nisy namoy ny ainy teto amintsika noho ny fandraisana andraikitra nataonareo", hoy ny fanazavany.
Nidera ny ezaka efa nataon’ny fitondram-panjakana koa ny teo anivon’ny Antenimieram-pirenena. Notsindriany mafy kosa anefa ny fahatsapantenan’ny olom-pirenena y fa “tokony hohatsaraina hatrany ny fandrindrana ny andraikitry ny tsirairay. Tokony ho samy hahatsapa tena ny rehetra fa tsy miandry saziana na baikoina vao hanao ny asa sy ny adidy tandrify azy, hoy hatrany izy. Niantso ireo tsy mitsaha-mitsikera ny ezaka efa ataon’ny Fitondram-panjakana koa ny depiote Christine Razanamahasoa. "Maro ny mimonomonona ka tsikeraina avokoa izay ataon’ny Fanjakana. Manentana izahay, ekeo ihany aloha ny toromarika efa nampitaina handresena ny fahavalo iraisana dia ny Coronavirus", hoy hatrany izy nanao antso avo.
Nanararaotra nampita ny hetahetam-bahoaka koa ny filohan’ny Antenimieram-pirenena amin’ny maha solombavambahoaka azy. Renay, hoy izy, ny fitarainam-bahoaka fa tsy tonga any amin’ny vahoaka tena sahirana ny fanampiana avy amin’ny Fitondram-panjakana. "Efa nampitaina any amin’ny tompon’andraikitra ny hetahetanareo vahoaka, saingy entanina koa ny olom-pirenena rehetra hanoratra ny anaran’izy ireo eny anivon’ny fokontany, satria noho izany antony izany no nahatonga ny olona sasantsasany tsy nisitraka fanampiana na dia mponina ao amin’ny fokontany misy azy aza", hoy ny fanambaràna. Nantitranteriny nandritra ity lanonam-panokafana ny firoviana ara-potoana ity koa fa "izao vanim-potoana diavin’ny Firenena izao indrindra no tokony hanaporofoana sy hameranana indray ny soatoavina malagasy. "Fihavanana, fifanampiana ary ny firaisankina no tokony hasehontsika manoloana izao valanaretina izao. Fotoana izao hamerenana amin’ny laoniny ny soatoavina malagasy", hoy hatrany ny fanambaràny.
Nanafatra ireo solombavambahoaka koa ny filohan’ny Antenimieram-pirenena ny mba hitsinjovan’izy ireo ny vahoaka avy any amin’ny Faritra misy azy avy. "Miandrandra ny fahendrentsika ny Malagasy indrindra ireo distrika nahalany antsika. Raha misy anton-javatra mampifanolana dia mifanatonà, aza avela hiotrika ela ny hatezerana fa tsy misy tsy vitan’ny fifanatonana", hoy hatrany ny fanazavany.
Vehivavy iray sy ny zanany norasarasain’ny jiolahy tamin’ny antsy BESALAMPY (226) 8 juillet 2020 Hofehezina ny fidirana an’Ambanja, vavahadin’i Diana sy Sava FIATREHANA NY COVID -19 (214) 8 juillet 2020 210 ireo voa tamin’ireo 578 natao fitiliana FIVOARAN’NY “COVID-19” ETO ANALAMANGA (172) 8 juillet 2020 Miverina amin’ny fihibohana tanteraka Analamanga, miato avokoa ny fampianarana COVID-19 (138) 8 juillet 2020 Naato ny sampan-draharaha sasany noho ny covid-19 FODIANA AN-TANINDRAZANA (134) 8 juillet 2020 Nahatratra mpijibika dingadingana nampiasa fitaovana voarara MPANARA-MASO NY JONO AO NOSY BE (132) 8 juillet 2020